Andramo anio, raha manana fampiharana 32-bit ny Mac-nao Avy amin'ny mac aho
Apple dia nanambara tamintsika izany macOS High Sierra no ho rafitra fiasa farany manohana ny fampiharana 32-bit. Izany hoe, avy amin'ny kinova manaraka an'ny macOS izay havoaka amin'ny volana septambra, dia tsy hamela fampiharana 32-bit mihodina. Fantatry ny mpamorona izany ary mampiditra atiny mety hijanona ambiny izy ireo raha tsy manavao.
Ao amin'ny fanavaozana macOS High Sierra manaraka, hampahatsiahy antsika indray ny famerana ny fampiharana i Apple. Ity kinova ity, ankoatry ny hafatra fampitandremana, dia misy fitaovana hanamorana ny tetezamita, ao anatin'izany a fomba fanombohana izay tsy mihodina fampiharana 32-bit.
Ity safidy ity dia mety amin'ny fanombohana Mac vaovao sy ny fizahana ny fampiasantsika isan'andro. Raha tsy mandeha ny rindranasa iray, na mihazakazaka manana olana, dia mety misy atiny 32-kely ary mety ho an'ny mpamorona ny manamboatra fanovana mety.
Midira amin'izany "Mode 64-bit ihany" ianao dia tsy maintsy:
Atsaharo ny rafitra.
Rehefa mirehitra indray, tazony ny bokotra Cmd sy R, noho izany dia hiditra ny fizarazarana fanarenana isika.
Avy any, tsy maintsy pulsar Asa vaventy. Tadiavo izao ary mifidy Terminal.
Rehefa nosokafantsika ny boaty terminal, nanoratra izahay:nvram boot-args="-no32exec"
Atombohy indray ny solosaina. Rehefa velomina indray dia ho maody 64-bit isika. Ny torohevitra dia ny manandrana zavatra betsaka kokoa noho ny tsara kokoa.
macOS Snow Leopard no andiany voalohany nihazakazaka tamin'ny 64-bit, roa ambin'ny folo taona lasa izay. Ny iray amin'ireo antony tsy nahatonga ny mpandraharaha nanao ilay dingana dia misy ifandraisany amin'ireo Mac taloha. Na ahoana na ahoana, ireo Macs ireo dia hampiasaina anio ho an'ny asa manokana ary azo ampiasaina amin'ireo asa ireo.
Ara-dalàna raha tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny rindranasa sasany, satria voafetran'ny rindranasa mifandraika 32-bit. Anisan'izany no ahitantsika:
Dropbox (noho ny serivisy fanamarinana azy).
Adobe (ateraky ny Adobe Creative Cloud, ankoatry ny fampiharana hafa) na,
System Preferensi sy Safari (noho ny takelaka tian'ny sasany sy plugins an'ny antoko fahatelo ).
Raha vantany vao nahavita ny asa sahaza anao na te hanohy hampiasa fampiharana izay tsy ao anaty 64 bit izao dia mila fotsiny ianao avadika ny dingana. Vahao indray ny terminal sy ny karazany:
Amin'ity fomba ity dia miverina amin'ny fifanarahana tanteraka isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Andramo anio, raha manana fampiharana 32-Mac ny Mac-nao